Iyo kambani Xuzhou Qinlong Ethnic Articles Co., Ltd. yakavambwa muna Kurume 2006. Ibhizimusi rekune dzimwe nyika rakabvumidzwa neHurumende yeVanhu vePurovhinzi. Ndiro hukuru hwekugadzira hwaro hwezvigadzirwa zvembatya dzemadzinza kuchamhembe kweJiangsu. Bhanga rePeople's Bank of China rakasarudzwa sebhizimusi rakasarudzwa rekugadzira zvinhu zvinodikanwa zvemarudzi madiki munyika yose panguva ye "Eleventh Five-Year Plan". Guta rekambani rakanyoreswa i154,898 US madhora. Inonyanya kugadzira uye kugadzirisa maSaudi akashongedzwa makepeni, akarukwa makepeni ane maburi, akarukwa kepu, naironi kepu, Oman caps, crocheted caps, ngowani chena, jacquard turbans, TR akadhindwa ngowani, jasi reArabia, Mbatya nezvipfeko zvakaita sebhurugwa, matauro ekunamatira, kunamata. homwe, uye magumbeze ekunamata.
Iyo kambani ine dhipatimendi rehunyanzvi kuunganidza maonero evatengi uye mazano kuburikidza nenzira dzakasiyana dzekuunganidza maonero uye mazano anobatsira mukusimukira kwekambani, uye kambani inogadzirisa panguva yakakodzera kumusika.
Ita hurongwa hwekutarisira vatengi uye kugadzirisa, uye zvishoma nezvishoma uvandudze zvinodiwa nevatengi uye uvandudze kugutsikana kwevatengi kuburikidza nekudzoka kushanya uye kutaurirana nevatengi vakakosha. Nzwisisa mhinduro kubva kune vatengi mumatunhu akasiyana pane zvigadzirwa nemasevhisi edu, kuitira kuti tigone kuwana uye kugadzirisa matambudziko mumisika yematunhu akasiyana nenguva, uye nekuvandudza chirongwa chebasa.
Kambani iyi yakaiswa zviri pamutemo mukugadzirwa muna Kurume 2007 uye parizvino yatora vashandi vakasimwa basa vanodarika mazana maviri (kusanganisira vashandi vashoma makumi mana nevasere), uye ine michina mikuru makumi mashanu yekusona, inodarika mazana maviri seti yemichina midiki yekugadzira machira, michina yekusonesa yemagetsi. , zvichingodaro. Inogadzira 500,000 makumi emakumi emhando dzakasiyana-siyana-akarukwa kepisi uye 200,000 seti dzemachira. Mari yekutengeswa kwepagore inodarika mamirioni makumi maviri eyuan, purofiti nemitero i500,000 yuan, uye mari yekunze inowanikwa inodarika mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica.
Iyo kambani inoteerera kune tekinoroji innovation uye inoramba ichigadzira musika wepasirese. Mhando gumi nembiri dzezvipfeko zvemarudzi uye heti dzakarukwa zvinotumirwa kuSaudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Algeria, Yemen, Turkey, Malaysia nedzimwe nyika nematunhu, uye anodiwa zvakanyanya nevatengi kumba nekune dzimwe nyika (kunyanya avo. vanoenda kuSaudi Arabia kunonamata).
Muslim Cap Black, Ciput Hijab, Best Muslim Cap, Hijab Dupatta, Mens Mosque Hats, Wool Kufi,